Toyota Land Cruiser 2011 (#695455) ကို Mahaaungmyay ၿမိဳ့... | CarsDB
ZX 60th Anniversary
6612 total views,3today
Lot Number: #695455
Landcruiser ကို 1951 ခုနှစ်မှာ
ဂျပန်နိုင်ငံက TOYOTA Company မှာစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်
သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်က4နှစ်ကိုတစ်ကြိမ်
ကားချစ်သူတွေကို ဖမ်းစားနှိုင်ခဲ့ပါတယ် နောက်ထပ်ထူးခြားမှု့ကတော့
1961 th . 1971 th.1981th .1991th
2001 th. 2011th တွေမှာ anniversary
အဖြစ်အထူးထုတ်ဆိုပြီး မွေးနေ့သက်မှတ်ထုတ်လုပ် ပေးထားတာပါ
ခုကားလေးကတော့ 2011 ခုနှစ် Anniversary အဖြစ် နှစ် 60 အထူးထုတ် Grade အနေနဲ့က ZX Grade ဖြစ်ပြီး 2017 ရုပ်ထွက် Original Japan Modified နဲ့ ခန့်ညားထည်ဝါတဲ့ Super Black အရောင်လေးပါ။
ZX Grade >>
Seat Motors, Seat Memory
Steering Motor, Steering Volume Control
Original TV, Ceiling TV, Original Back Camera (မျဉ်းကွေး)
Left Side Camera, Front 3D Wide Camera
လျော့ဘား အနိမ့်အမြင့် ခေါ် Sport / Comfort Mode
Speed Low/High, Hill Start Assist
Parking Assist With Round Sonar
RSCA Off (Roll Sensing Curtain Airbags)
VSA Off (လမ်းမချော်စနစ်)
နောက်ဆုံးခုံ မော်တာနဲ့ အခေါက်အသိမ်း လုပ်လို့ရ
Japan လေလံဂရိတ် 4/B နဲ့ ဆွဲထားပြီး နံပတ်ထုတ်ထားပြီး ဆောင်ခြုံထားတဲ့ကားလေး (မြန်မာပြည်မှာ Kilo ငါးထောင်ဝန်းကျင်လောက်ပဲမောင်းရသေးတဲ့ကားလေးပါ) ကို လက်ငင်း အရစ်ကျ အဆင်ပြေရာနဲ့ ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ။
CarsDB တွင် ( ဦး/ဒေါ် ) Khaing Thin Zaw မှ ကြော်ငြာတင်ထားသော Toyota Land Cruiser 2011 နှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းလိုသည်ဟု ပြောပါရန်။